Ukunikezelwa kwePixel 2 kaGoogle kusishiya sonke iscreen se-smartphone | Iindaba zeGajethi
Kancinci kancinci, idatha malunga nesixhobo esitsha sikaGoogle iyafika kwaye siyathemba ukuba oku kongeza ukuphuculwa okumbalwa xa kuthelekiswa nohlobo lokuqala olusungulwe ngabafana abavela kwiNtaba yokujonga. Sanelisekile ngenkcazo yemodeli yokuqala yePixel kodwa sikwafuna ukuba uhlobo olulandelayo lube ngcono kakhulu ngandlela zonke. Ngokusengqiqweni siyazi ukuba kukho ilizwe elilahlekileyo kwinkcazo-ntetho kodwa akunakuphepheka ukuthetha malunga nokuba ngubani oza kuba ngumlandeli kwimodeli yokuqala kaGoogle Pixel, Ngubani oza kuyenza? Ngaba iya kuba sisixhobo se-HTC ngaphandle kwetywina lophawu? Ngaba ukujonga kwePixel 2 kuya kutshintsha kakhulu?
Ngamafutshane, banesandla esihle semibuzo ngokuqinisekileyo eya kuba neempendulo zabo kwiinyanga ezizayo kwaye ngelixa ziphendulwa sinokonwabela ukuhanjiswa kwesixhobo esingenanto yakwenza nenkampani, kodwa esithanda kakhulu njenge umxholo. Le yenye yeevidiyo ezinefayile ye- Ingcinga kaGoogle Pixel 2:
Ngaphandle kwamathandabuzo, le nto inomdla ngokwayilwa, isikrini kunye nezinye, kodwa akukho nto sinokuyiqinisekisa ngayo ngenxa yoko sishiyekile, unikezelo oluhle. Ngokwam, imodeli yangoku ayindonelisi ngokwendlela eyakhiwe ngayo (ngakumbi ngasemva), kodwa iyaziwa into yokuba abanye abantu bathanda ntoni, abanye banokungayithandi kwaye kule meko iPixel ayikhange igxekwe kuyilo lwayo yodwa izixhobo zangaphakathi. Kuya kufuneka silwazi ulwazi oluhluziweyo kwezi veki zimbalwa zizayo kodwa besesitshilo ukuba kusekho indlela ende ekusafuneka yenziwe ukuze kuboniswe le nguqulo yesibini yePixel, into engekhoyo encinci yeyokuqala beta yabaphuhlisi be-Android O.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » Ukunikezelwa kwePixel 2 kaGoogle kusishiya sonke iscreen se-smartphone